I-BAMBOO VS I-SILK SHEETS (UMAHLUKO KUNYE NEPROSES KUNYE NE-CONS) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa I-Bamboo vs i-Silk Sheets (Umahluko kunye neProses kunye ne-Cons)
Apha sabelana ngokuthelekisa i-bamboo vs silk sheet kubandakanya ubuchule kunye neengozi, iindleko kwaye zeziphi ezona zilungileyo kuyilo lwakho lokulala. Zombini iziqalo zoqalo kunye nesilika zinodumo lokuba zithambile, zinokuchukumiseka, kwaye ziyolo. Ukuba ulungele ukutyala imali kwiseti yamashiti agudileyo kodwa ungaqinisekanga ukuba leliphi ilaphu oza kulikhetha, ufike kwindawo elungileyo.
Kuqala siza kuxoxa ngomahluko phakathi kwala malaphu mabini. Emva koko, siya kuqhathanisa size sibahlule kuzo zonke iindidi ezibalulekileyo.
Yintoni amaSphepha eSilika?
Zithini iiPhepha zoqalo?
I-Bamboo vs i-Silk Sheets Pros & Cons
Iindleko ze-Bamboo vs Silk Sheets
Ngaba i-Bamboo Sheets ibhetele kuneSilk?
I-Bamboo vs i-Silk Sheets infographic
Isilika yintsinga emangalisayo eyomeleleyo egudileyo, eyenziwe sisinambuzane ekuthiwa sisilika. Imibungu yesilika yenza umsonto omnye wesilika ukuze yenze amaqombolokoshe. Xa begqibile, abavuni beentshulube ze-silk bayayichitha loo cocoon, ize yona yenziwe ijike ibe yintambo yesilika.
Amashiti alukiwe ngentambo yesilika zezona zinto zincinci kwaye zezona zinto zilungileyo zokulala kwimarike. Amashiti okwenene esilika aya kuthamba kwaye ayabamba, hayi ukutyibilika.
Ukwenza amashiti oqalo, izikhondo zesityalo se-bamboo ziyavunwa. Inkqubo yemichiza ebizwa ngokuba yi-viscose inyibilikisa iziqu zoqalo kwaye ivumela iselulosi ukuba ikhutshwe. I-cellulose iphothwe kwimicu, ethi ke ilukwe ibe lilaphu.
Apha sikala Iishiti zoqalo ziluncedo kunye nengxaki ngokuchasene namashiti wesilika ukuze ubone ukuba yeyiphi efanelekileyo kulwalamano lwezilwanyana, ukucoceka, ukuphefumla, ukuhlala kunye neendleko.
Njengoko sixoxile ngasentla, isilika ivela kwimibungu yesilika. Imibungu yasekhaya yesilika iye yazalelwa ukuveliswa kwesilika amawaka kunye namawaka eminyaka.
Ukukhetha ukuzala kukhokelele kutshintsho koluhlobo lubenza bangakwazi ukuhlala endle. Ukuba uzikhethele ukuba ungazityi iimveliso ezixhomekeke kwizilwanyana kwimveliso, amaphepha oqalo lukhetho olungcono kuwe kunesilika. Akukho zilwanyana zibandakanyekayo kwimveliso yelaphu.
Zombini isilika kunye noqalo zizinto zendalo eziza kuthi zitshintshe ngokuhamba kwexesha.
ngubani onika i-toast emtshatweni
I-bamboo ihlala ithathwa njengempahla eluhlaza-ecocekileyo ngenxa yenqanaba lokukhula elimangalisayo lengca eqinileyo.
Ukukhula ukuya kuthi ga kwiinyawo ezimbini kwiyure enye engama-24, kungalula ukunikezela kwingcinga yokuba iishiti zoqalo azithathi cala kwindalo esingqongileyo.
Ngelishwa, oku akunjalo. Inkqubo yeekhemikhali esetyenziselwa ukuguqula iziqu zoqalo zibe yifayibha efumanekayo kudala iimveliso ezikhutshelwa emoyeni kwaye zingcolise imeko-bume. Isilika ivunwa kusetyenziswa amanzi ashushu okanye umphunga kuneekhemikhali ezinobungozi.
Kwelinye icala, ukulima u-bamboo akufuneki kusetyenziswe iyeza lokubulala izitshabalalisi kunye neyeza lokubulala iintsholongwane. Ukugcina umbungu wesilika kufuna ukubanika ukutya okuzinzileyo kwamagqabi e-mulberry, kwaye onke loo magqabi kufuneka evela ndaweni ithile.
Imithi ye-Mulberry ifuna ukubulala izitshabalalisi kunye nezichumisi, kodwa hayi njengesityalo esifana nekotoni.
Ukuphefumla kwemveliso yelaphu elinikiweyo kwehla ngakumbi kwiluki ngaphandle kwento.
Iimakhishithi zesilika zihlala zakhiwa kusetyenziswa i-satin weave. Amashiti e-bamboo ahlala efumaneka kwi-percale okanye kwi-sateen weave.
I-Percale sisixhobo esiqinileyo, esithetha ukuba akukho moya ungako ungena kuyo, ukanti ii-percale bamboo sheet zinodumo lokuphefumla.
Ingenzeka njani le nto? Ngenxa yokuba i-bamboo yinto yokucoca ubushushu, iyanceda ukulawula ubushushu kwaye igcine abalalayo bepholile. Ukucola kwe-bamboo egciniweyo kugcina la maphepha ukuba angahambelani ngokusondeleyo nomzimba wakho, kukhokelela ekusasazeni okungcono komoya ebusuku.
Xa ii-bamboo fibers zilukiwe zangumzekelo othile, loo pateni ibizwa ngokuba yi-‘sateen ’. Xa imicu yesilika iphothiwe kwipateni efanayo, kubhekiswa kuyo njenge 'satin'.
Ke: ipateni efanayo yokuluka, izinto ezahlukeneyo, amagama ahlukeneyo. Amalaphu e-Satin okanye e-sateen alukiwe angaphantsi alukiwe kakhulu kune-percale.
Oku kuvumela umoya omninzi ukuba uhambe ngendwangu, ukwandisa ukuphefumla, nokuba ngaba amaphepha enziwe ngesilika okanye ngoqalo.
Iimakhishithi zesilika zihambelana ngokusondeleyo kumzimba womzimba wakho, onokuthi unciphise ukuhamba komoya wonke. Ukongeza, ukuba ubile ebusuku, iimakhishithi zesilika zinokubonisa amabala okubila kusasa. Amashiti e-bamboo amelana ngakumbi nokubila.
Phantsi kweentlobo ezithile zovavanyo lwamandla, kuyinyani ukuba isilika inokugqitha intsimbi. Kodwa kuya kuba kukulahlekisa ukucebisa ukuba amashiti wesilika akanakonakaliswa ngumonakalo.
Imisonto yesilika ilungile kangangokuba inokubanjwa ngokulula ngozipho olujijekileyo okanye nakwisiqwenga sesikhumba esirhabaxa, esenza ingqibelelo yelaphu ukuba yehle. Imisonto ye-bamboo iyatyeba kwaye ihlala ilukiwe ngokuqinileyo, ibenza ukuba bangabanjwa lula ziinyembezi.
Iimakhishithi zesilika zihlala zingenakho ukuhlanjwa ngomatshini, kwaye azinakufakwa kwisomisi. Ungazihlamba izandla usebenzisa amanzi abandayo kunye nesepha, okanye uyise kwindawo yokucoca eyomileyo. Iishiti zoqalo zinokuhlanjwa ngomatshini kwaye zomiswe, zenze ukuba kube lula ukuzigcina.
Akukho kuhamba ngeenxa zonke kuyo: amashiti wesilika axabisa kakhulu, abiza kakhulu kunamashiti oqalo.
Iseti efanelekileyo yamashiti e-bamboo inokuthengwa ngeenxa zonke zeedola ezingama-50, kunye neeseti ezikumgangatho ophezulu ezithengisa kwakhona ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola.
Xa kuthengwa amashiti esilika, kubalulekile ukuqaphela imvelaphi yesilika. Umgangatho wesilika ugqitywa kukutya kwesilika okujikelezayo.
Imisundululu yasendle itya nawaphi na amagqabi ayifumanayo, ke imisonto evuniweyo endle inobulunga obuphantsi kunesilika esilinyiweyo. Amashiti wesilika asendle aqala kwi- $ 300 kwibhedi enkulu.
Isilika eyalinywayo, ekwabizwa ngokuba yisilika yebulberry, ivela kwimisundululu yasekhaya. Ukutya kwabo kunamagqabi e-mulberry ngokupheleleyo.
Isilika eyenziwe kwiifama zombungu wesilika ithathwa njengeyona silika yomgangatho uphakamileyo ifumanekayo. Kwiseti yokumkanikazi eseti ye-100% yamashiti e-mulberry, cwangcisa ukuchitha ubuncinci i-500 yeedola ukuya kuthi ga kwi-800 yeedola.
Amashiti e-bamboo aluncedo ngaphezu kwamashiti esilikhi kwiindawo ezintathu. Okokuqala, amaphepha e-bamboo axabisa kakhulu kunamashiti wesilika.
Ziyomelele ngakumbi kwaye kulula ukuzinyamekela, kwaye azidingi kucocwa ngokukodwa. Kwaye okokugqibela, ababambisi bubushushu obungako, benzela ukuba kupholile kwaye kube lula ukulala.
Nangona kunjalo, ukuthungwa kwesilika akunakulinganiswa okanye kuqikelelwe. Abanye abantu, iindleko ezongezelelekileyo kunye neemfuno zolondolozo kufanelekile. Abanye bethu, kuhlala kukho uqalo.
Ngomxholo onxulumene noko utyelelo lwethu bamboo vs umqhaphu amaphepha ukubona ukuba zikwinqanaba elingakanani. Ngaba uthanda amaphepha amnandi e-bammboo okanye amashiti wesilika? Sazise kumagqabantshintshi.
imibala engwevu yekhitshi
ukujonga njani ukuba idayimane iyinyani
Iikhompyutheni zezimemo zeminyaka engama-50 zomtshato
iingoma zokungena kwiqela lomtshato
igalikhi yekhitshi enesingasiqithi